Ukuphupha ngokutsiba Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Phupha ngokutsiba. Ukususela kumaxesha amandulo, abantu bebenomdla wokwazi intsingiselo yamaphupha. Zininzi iindlela zokutolika amaphupha, esi sikhokelo siza kukunceda uqonde ngcono intsingiselo yawo.
Kwibala lemicimbi yezomkhosi, igama elithi "umsele" linokusetyenziselwa ukuchaza indawo yenqaba. Eli gama linokufumaneka kwimidlalo yasebusika, lisetyenziselwa ukubiza igama lezemidlalo njenge-skiing.
Umahluko wenziwe phakathi kwezi ntsingiselo zimbini kwinqanaba lephupha. Ke ngoko, umntu kufuneka aqwalasele ngokuthe ngqo koluphi uhlobo lokuqiniswa / umsele obonwe ephupheni. Ngapha koko, iimeko ezihamba nazo zidlala indima ebalulekileyo ekutolikeni lo mfanekiso wephupha kwaye ke kufuneka zisetyenziswe.
1 Uphawu lwephupha «Schanze» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Schanze» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Schanze» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Schanze» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba intwasahlobo ye-ski ibonwa ephupheni, iyalumkisa ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha abahlobo abayingozi. Ke ngoko, kuya kuba bubulumko ukuba ujonge kubuhlobo bakho ebomini ukuze ufumanise ukuba ngubani ofuna ukukukhathaza.
Ukuba ubona udonga olukhuselayo ephupheni lakho oludibanisa iinqaba ezininzi (iinqaba) kunye, umntu olalayo kufuneka oyise imiqobo emincinci kwaye uqaphele ebomini bakho. Kodwa uya kuyifumana ngokulula. Ukuqiniswa kwiphupha kungabonakalisa umnqweno wamaphupha onqabiseko nokhuseleko.
Kwibala lezemidlalo lasebusika, uphawu oluthi «Schanze» lunokubonwa njengokutsiba ephupheni ngokoluhlalutyo ngokubanzi, okt umphuphi ikhono kwindawo ebonakalayo. Nabani na onyuka itrampolini ephupheni lakhe kufuneka aqonde ukuba baya kuthi chu kodwa baphumeze iinjongo zabo ebomini.
Ukuba umphuphi uyaxhuma, uboniswa ukuba uyedwa ekuvuseni ubomi. Ukuba uphumelele ukwenza ukufika okukhuselekileyo ephupheni, uya kuphumelela ngale ndlela uziphethe ngayo. Ukufika kwindawo engakhuselekanga okanye ukusilela kule meko kunokubonisa ukungaqiniseki okuthile kulowo uleleyo.
Uphawu lwephupha «Schanze» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwamaphupha, induli njengenqaba okanye inxenye yesikhuni inokuxhokonxa a ukunciphisa ukuzithemba, uloyiko okanye ngexesha lokulala. Umphuphi uziva engakhuselekanga kwimeko yakhe yangoku yobomi okanye akakwazi ukusingatha imeko ethile okanye umba. Ubudlelwane bakho phakathi kwabantu bunokuqhawuka kwaye uzive ulilolo okanye ulilolo.
Ukwakhiwa kwenqaba, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, kubonisa imvukelo yangaphakathi yalowo uleleyo ngokuchasene nokufumana okubalulekileyo ngokunxulumene nobuntu bakhe. Ukuba udonga lwenduli lutshatyalaliswe ephupheni, ulindelo oluthile lwalo mphuphi aluyi kuzalisekiswa ebomini.
Ukutsiba induli njengophawu lwephupha kunokubonisa inkqubela phambili ekhawulezayo nenesibindi. Nangona kunjalo, eli phupha kufuneka likwazise ukuba kufuneka ujongane neemvakalelo ezibandayo kunye nomona ngenxa yempumelelo yakho. Ukubona kwesibonelelo sokutsiba ephupheni nako kunokufuzisela ukuqonda, inokuhla ngokulula ebomini, kodwa kunzima nangakumbi ukunyuka.
Uphawu lwephupha «Schanze» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya ubona kwisimboli «Schanze» njengenxalenye yenkqubo yokhuselo, ekubhekiswa kuyo iindlela zokukhusela ubukrelekrele lowaphuphi. Kuya kufuneka ujonge oku amaxesha ngamaxesha ukufumanisa ukuba usakhuselekile na. Kananjalo kuya kufuneka ucinge ngokuba zeziphi iindlela zokhuselo ezifunekayo.